Fako mampidi-doza - Filankevitry ny morontsiraka afovoany
Fanariana fako mampidi-doza
Efa nanontany tena ve ianao hoe inona no hatao amin'ireo akora simika tsy ilaina, lany daty na tsy ampiasaina ao an-dakozia, efitra fandroana, fanasan-damba, garazy na trano fitehirizam-bokatra? Sa ahoana no hanesorana ny tavoahangy entona tranainy, ny flare an-dranomasina ary ny batterie fiara?
Aza asiana fako mampidi-doza! Ny fako mampidi-doza apetraka ao amin'ny iray amin'ireo dabao telo dia mety hiteraka afo ao amin'ny kamiao, ao amin'ny toeram-pivarotana fanodinana ary any amin'ny fanariantsika. Mampidi-doza ho an'ny mpiasantsika koa izy ireo.
Azafady, ario am-pitandremana sy am-pahamendrehana ny fako mampidi-doza anao amin'ny fampiasana ny iray amin'ireo fomba voatanisa etsy ambany.
Collection Chemical Cleanout an-trano
Ny fanadiovana simika ao an-tokantrano dia atao indroa isan-taona ao amin'ny morontsiraka afovoany ataon'ny Filankevitry ny morontsiraka afovoany, miara-miasa amin'ny Manampahefana miaro ny tontolo iainana NSW.
CleanOut dia tolotra MAIMAIMPOANA amin'ny fanariana azo antoka ireo akora simika mahazatra isan-tokantrano, izay mety hiteraka fahavoazana ny maro raha tsy ariana tsara.
Ny fanangonana simika ho avy any amin'ny morontsiraka afovoany dia hatao:
11 sy 12 Jona 2022 - Long Jetty Depot, Cnr The Entrance ary Wyong Roads (mivily miankavia mankany amin'ny Toerana Morris): 9 maraina - 3.30:XNUMX hariva.
Ny akora simika ao an-tokantrano ekena dia ahitana:
Ny loko sy ny vokatra mifandraika amin'ny loko (manify, strippers, varnishes sns)
Pestisides, herbicides ary poizina (fungicides, baits/poisons, preservatives hazo)
Solvents sy mpanadio trano
menaka maotera, solika ary tsiranoka
Asidra sy alkali
Simika fialamboly (simika sary sns)
Fitehirizana sy fitaterana
ATAOVY TSARA SY FITATERANA TSARA NY CHEMICAL:
TSY MIFAMPAMPIHAROA MISY MISY MISY MISY SY MISY AZY fa mety hiteraka fanehoan-kevitra mampidi-doza izany
Na aiza na aiza azo atao dia tehirizo ao amin'ny fitoerany voalohany ny akora simika rehetra
Ataovy azo antoka fa misy marika mazava sy voaisy tombo-kase tsara ny fitoeran-javatra. Raha tsy hainao ny ao anatiny dia asio marika hoe 'SIMIKALO TSY FANTATRA'
Mety hivoaka ny rano mandritra ny fitaterana; fonosina tsara amin'ny gazety ny kaontenera misy ranon-javatra, apetraho ao anaty harona plastika mafy ary avy eo siny na lovia
Arovy amin'ny mpandeha ny zavatra simika ao an-trano, ohatra, ao anaty baoty
Mariho azafady fa TSY serivisy fandraisana finday ity.
HO AN'NY TOKATRA IHANY IO FOTOANA IO. Tsy ekena ao amin'ny foibe CleanOut ny habetsahana mifandraika amin'ny raharaham-barotra sy ara-barotra - antsoy ny Environment Line amin'ny 131 555 mba hahitana ny fanariana mety ho an'ny orinasa.
Mahatratra 20 litatra na 20kg isaky ny entana no ampiasaina afa-tsy ny loko sy ny vernis izay ekena hatramin'ny 100 litatra amin'ny haben'ny kaontenera ambony indrindra 20 litatra na 20kg.
MBA ATAO ATAO TSARA NY CHEMICAL ARY AZA MAMPIASA.
Raha mila fanazavana fanampiny dia antsoy ny EPA Environment Line on 131 555 na mitsidika ny CleanOut tranonkala.
Foibem-pandrefesana ny fiaraha-monina
Ekena ao amin'ny Tobim-pitantanana ny fako amin'ny Buttonderry ny kojakoja fako olana mahazatra ao an-tokantrano Foibem-pandrefesana ny fiaraha-monina tsy andoavam-bola.
Ny entana ekena dia ahitana:
loko misy rano sy menaka
menaka maotera ampiasaina sy menaka hafa
asidra firaka sy bateria tànana
varingarina entona sy mpamono afo
fantsona mahazatra sy jiro fluorescent compact ary
Tsidiho ny Tranonkala Community Recycling Center Raha mila fanazavana fanampiny.
Fandaharana fanariana afo an-dranomasina
Tsy azo ariana ao anatin'ny dabam-tranonao ny Marine Flares. Mampidi-doza lehibe ho an'ny mpamily mpanangom-bokatra sy ny mpiasan'ny fanodinana izy ireo raha mirehitra eo am-panangonana.
Azonao atao ny manary tsara ny afonao taloha amin'ny iray amin'ireo fanangonana Roads and Maritime amin'ny Novambra, Janoary ary Aprily. Ny ankamaroan'ny flare dia manana daty fampiasana mandritra ny telo taona, ary tsy maintsy soloina alohan'ny daty lany daty.
Ny Roads and Maritime dia manana fandaharan'asa fanangonana ho amin'ny fanariana azo antoka ny afo efa lany andro.
Azafady, tehirizo ao amin'ny toerana azo antoka ao an-tranonao ny afo efa lany andro mandra-pahatongan'ny fandaharana fanariana manaraka ao amin'ny faritra misy anao, tsidiho ny Lalana sy Maritime tranonkala ho an'ny vaovao fanampiny.
Efa nojerenao ve ny tananay Torolàlana momba ny fanariana fako sy fanodinana fako AZ mba hijerena raha voatanisa ny entanao mampidi-doza?